Vectorworks နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း စာအုပ်လေးတွေ လက်လှမ်းမီသလောက် စုထားတာ လေးတွေပါ။ AutoCAD လောက်တော့ စာအုပ် စုံစုံလင်လင် ရှာမတွေ့ သေးပါဘူး။ သူငယ်ချင်း ခိုင်ယဉ်မွန် Cbox မှာ မေးသွားတဲ့ စာအုပ်လေးတွေပေါ့။ သူငယ်ချင်းရေ... သူ့ထက် စုံလင်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေ ရရင်လည်း ထပ်တင်ပေးမယ်လေကွာ နော။ ခုလောလောဆယ်တော့ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေနဲ့ ကျေနပ်ပါဦးလို့။ :)
Gallery- USE THIS.mcd
WMD- USE THIS.mcd
Buy App Store Reviews and Downloads | App-Reviews.org said...
Thank you for sharing the full information in your blog. I found it by accident and now I have become your regular reader. I will follow the updates of your blog.